मेलम्चीको बाँध फुट्दा इन्जिनियरसहित दुई बेपत्ता, दुई जना घाइते | Ratopati
मेलम्चीको बाँध फुट्दा इन्जिनियरसहित दुई बेपत्ता, दुई जना घाइते
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeअसार ३०, २०७७ chat_bubble_outline0
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँधस्थलको १७ नम्बर गेट भत्किँदा सिन्धुपाल्चोकमा एक इन्जिनियरसहित २ जना बेपत्ता भएका छन् ।
बेपत्ताको खोजीकार्य जारी रहेपनि हालसम्म फेला नपरेको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनले इन्जिनियर शतिश वैद्य र चालक राधाकृष्ण थापा खोलामा बगेर बेपत्ता भएको भन्दै उनीहरुको खोजीकार्य जारी रहेपनि हालसम्म फेला पर्न नसकेको बताए ।
यस्तै घटनामा घाइते भएका इन्जिनियर शेखर खनाल र सर्भे असिस्टेन्ट पेम्बा दोर्जे तामाङलाई उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको उनले बताए । आयोजनाको सुरुङमा पठाइएको पानीको अवस्था हेर्नका लागि जाँदा एकाएक बाँधको १७ नम्बर गेट भत्किन पुगेको थियो । सो क्रममा एउटा गाडी समेत बगाएकाे छ ।
केही दिनअघि मात्रै मेलम्ची आयोजनाको सुरुङमा पानी राखेर परीक्षणको काम भइरहेको थियो ।
#मेलम्ची खानेपानी आयोजना
मिर्गौला तस्करीमा संलग्न सबै अरोपी धरौटीमा छुटे, एसएसपीको चलखेल
नेपाल-भारतबीचको बैठकमा के–के निर्णय होला ?
प्रधानमन्त्री ओलीको डेडलाइन : नेकपा विवाद सोमबारभित्र ‘वारपार’ !
कुलमानको कार्यकाल एक महिना बाँकी, दोहोरिन नदिन चौतर्फी चलखेल
ओली र प्रचण्डबीच तोडियो संवादहिनता, १० दिनमा पहिलो भेटवार्ता
बार एशोसिएशनको ध्यानाकर्षणपत्रले न्यायालयमा सुधार कति सम्भव ?
कार्यालय प्रमुख जानकारीविनै राजधानी हिँडेपछि...
यस वर्ष गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरमा मेला नलाग्ने
मानवअधिकार आयोगको सरकारलाई सिफारिश
राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीमा कोरोना देखियो
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ब्याजदर एकल विन्दुमा, बैंकिङ क्षेत्रकै सवैभन्दा सस्तो
काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरामा १५ वर्षीया किशोरी बलात्कृत
एक ट्यापमा बोलेरै नेपाली टाइपिङः हाम्रो ‘नेपाली किबोर्ड’ थप उपयोगी सुबिधाहरूका साथ’ नयाँ अपडेट सार्वजनिक
राजनीतिक अन्योलको जिम्मा कसले लिने ?
चिया श्रमिकले दिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी